/g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); }); နိဒါန်း​ | WaitZar User's Guide /g,'>').replace(/"/g,'"'),data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u1039]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if(data != data_escaped)$(this).replaceWith(data); }); }); //]]>
WaitZar User's Guide
Simple Romanized Input for the Myanmar Language
ဝိဇ္ဇာ (Wait Zar) မှ ြကိုဆိုနှုတ်ခွန်း​ဆက်ပါတယ်။
ဝိဇ္ဇာဟာ ြမန်မာ​ဘာသာ​စကား​ကို အဂင်္လိပ်​အသံထွက်နဲ့​ ရိုက်နိုင်တဲ့​ စာရိုက်​စနစ် (syllable-level romanised input system) ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီ​ေဆာ့​ဖ်ဝဲကို အခုလိုရယူ အသံုး​ြပုတဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​တင်ပါတယ်။ ဝိဇ္ဇာရဲ့​ ​ေနာက်ဆံုး​ထုတ် ဗား​ရှင်း​ေတွကို ရယူချင်တယ် ဆိုရင် သို့​မဟုတ် ဒီ​ပ​ေရာဂျက်​မှာ ပါဝင်​ကူညီ​လိုတယ်ဆိုရင်
မှာ ရယူ၊​ ဆက်သွယ် နိုင်ပါတယ်။ ဝိဇ္ဇာ​​ေဆာ့​ဖ်ဝဲနဲ့​ ပတ်သက်တဲ့​ သတင်း​​အချက်​အလက်များ​နဲ့​ ​ေဆာ့​ဖ်ဝဲ Update များ​ကို အချိန်နဲ့​ တ​ေြပး​ညီ သိရှိ ရယူ​လိုတယ်​ဆိုရင် ​ေအာက်မှာ ​ေဖာ်ြပထား​တဲ့​ mailing list ကို ဆက်သွယ် နိုင်ပါတယ်။
ဝိဇ္ဇာဟာ လူအများ​စု​ေပါင်း​ပါဝင် ​ေရး​သား​ထား​တဲ့​ ပ​ေရာဂျက် (Community Project) တစ်ခုပါ။ Open-Source ​ေဆာ့​ဖ်ဝဲြဖစ်ြပီး​ အခမဲ့​ ရယူ အသံုး​ြပုနိုင်ပါတယ်။ (အခုဖတ်ရှု​ေနတဲ့​ လမ်း​ညွှန်ဟာ Open Office မှာ ဝိဇ္ဇာကို အသံုး​ြပု ရိုက်နှိပ်ထား​တာ ြဖစ်ပါတယ်။)
စာ​ညွှန်း​​။​​ ​။​ နိဒါန်း​
No Response to "နိဒါန်း​"
▼ Wait Zar User's Guide
▼ ဤလမ်း​ညွှန်ကို ဖတ်သင့်​သူများ​
▼ လိုအပ်ချက်များ​ Requirements
▼ အ​ေြခခံ အသံုး​ြပုပံု Basic Usage
▼ ြမန်မာမှ အဂင်္လိပ်သို့​ ​ေြပာင်း​လဲြခင်း​ Switchin...
▼ ြမန်မာစကား​လံုး​များ​ ရိုက်နှိပ်ြခင်း​ Typing Word...
▼ ပါဌ်ဆင့်​ စကား​လံုး​များ​ Pat-Sint Words
▼ System Tray Icon
▼ The “Typing” Sub-Menu
▼ Blog Sticker
▼ စကား​လံုး​တစ်လံုး​ကို ရှာ​ေဖွြခင်း​ - FindingaWo...
▼ အ​ေထာက်အကူြပု ကီး​ဘုတ် - Help Keyboard
▼ အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့်​ ရိုက်နှိပ်ြခင်း​ - Romanisatio...
▼ စာရိုက်ထည့်​သည့်​နည်း​လမ်း​များ​ Typing Options
▼ ဘား​ဂလစ်ြဖင့်​ စာရိုက်ထည့်​ြခင်း​ Burglish Input
▼ ကီး​ဘုတ်ြဖင့်​စာရိုက်ထည့်​ြခင်း​ Keyboard Input
▼ ေဇာ်ဂျီဝမ်း​ Zawgyi-One
▼ မိုင်ဝင်း​ ၂.၂ myWin 2.2
▼ ြမန်မာ ၃ Myanmar 3
▼ ဧရာ Ayar
▼ ရှမ်း​ ကီး​ဘုတ်များ​ Shan Keyboards
▼ အြပင်အဆင်များ​ - Settings
▼ Changing the Defaults
▼ ကိုယ်ပိုင် စကား​လံုး​များ​ ထည့်​သွင်း​ြခင်း​ - Add...
▼Running Wait Zar fromaUSB Drive with Pstart
▼ြပဿနာများ​ ​ေြဖရှင်း​ရာတွင် ​ေမး​ေလ့​ရှိသည့်​ ​ေမး...
▼ ဝိဇ္ဇာ ပ​ေရာဂျက်သို့​ ဆက်သွယ်ြခင်း​ Contacting the...
▼ ​ေနာက်ဆက်တွဲ က- လိုင်စင် Appendix A: License
Adding () Ayar () Basic () Burglish () Changing () Contact () Defaults () Drive () English () FAQ () Finding () Help () Hotkey () Icon () Input () Keyboard () License () menu () Myanmar () Myanmar3() myWin 2.2 () Option () Pat-Sint () Requirement () Romanisation () Setting () Shan () Sticker () Switching () System () Tray () Troubleshooting () Typing () Usage () USB () user guide () Word () Words () Yunghkio () Zawgyi-One () ကီး​ဘုတ် () ခရီးေဆာင် () ခလုတ် () စကား​လံုး​ () စာရိုက် () ဆက်သွယ် () ထည့်​သွင်း​ () နည်း​လမ်း​ () နိဒါန်း​ () ပါဌ်ဆင့်​ () ဖတ် () ဘား​ဂလစ် () မိုင်ဝင်း​ ၂.၂ () ရှာ​ေဖွ () ရိုက်နှိပ် () ြမန်မာ () ြမန်မာ ၃ () လမ်း​ညွှန် () လိုင်စင် () လိုအပ်ချက် () အဂင်္လိပ် () အြပင်အဆင် () အသံုး​ြပု () အ​ေထာက်အကူြပု () အ​ေြခခံ () အ​ေြဖ () ဧရာ () ေဇာ်ဂျီဝမ်း () ေမး​ခွန်း​ () ​ေြပာင်း​ ()
Top. Copyright WaitZar User's Guide 2009. Wordpress Theme by simplyWP.
Blogger Template by Anshul Distribution by New Blogger Templates